Puntland oo Xukun Dil ah ku Fulisay 5 nin oo Loo Heystay Argagixisanimo. |
Puntland oo Xukun Dil ah ku Fulisay 5 nin oo Loo Heystay Argagixisanimo.
Bosaaso(GNN):-Maxkamadda Ciidamada Puntland, ayaa dil-toogasho ah ku fulisay shan nin oo lagu eedeeyey in ay ka tirsanaayeen ururrada Daacish iyo Al-Shabaab.
Magacyada raga la toogtay ayey maxkamaddu ku kala sheegtay:
Raggan maanta lagu fuliyay dilka toogashada ah ayaa waxaa la sheegay in muddo dheer ay ku xirnaayeen xabsiga dhexe ee magaaladda Boosaaso, kuwaas oo kol hore laga wada qabtay gudaha deegaanada maamulka Puntland.
Waa markii ugu horeysay oo tiro intaas dhan oo ku eedeysan argagisonimo lagu toogto magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo bilihii la soo dhaafay ay dilal badan iyo qaraxyo ka dhaceen, kuwaas oo masuuliyaddoda ay sheeganayeen dagaalamayaasha Daacish iyo Al-Shabaab.
Sidoo kale maamulka Puntland ayaa lagu eedeeyaa in dembiyo aysan galin ay dusha u saaraan dadka ka soo jeeda gobolada koonfureed ee dalka, wallow ay inta badan eedahaas beeniyeen madaxda maamulka Puntland.